I-Avanafil powder emfutshane (330784-47-9) hplc =98% | Ukwahlula i-sex powder
/ iimveliso / Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones / I-Avanafil powder
Akukho kalo SKU: 330784-47-9. iindidi: Ukusetyenziswa kwamadoda, Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
Avanafil powder isebenza ngokwandisa ukuhamba kwegazi ukuya kwilungu lobudoda ngexesha lokuvuselelwa ngokwesondo. Ukonyuka kokuhamba kwegazi kunokubangela ulwakhiwo. Uncedo lwe-avanafil kukuba ikhawuleze kakhulu isenzo xa kuthelekiswa nezinye iihormoni ezandisa isondo. Ifunxwe ngokukhawuleza, ifike koxinaniso oluphezulu malunga nemizuzu engama-30-45.
Ifomula yeMolekyuli: C23H26ClN7O3
Ubunzima Ezinto: 483.95
Makhe sijonge kwiziphumo zetyala elinye leeveki ezili-12 zeSigaba III ngokukodwa. Inani elipheleleyo lamadoda angama-646 abelwa ngokungacwangciswanga ukuba athathe i-50, 100, okanye i-200 mg ye-Avanafil powder imizuzu engama-30 ngaphambi kokuqalisa umsebenzi wesondo. Kwakungekho zithintelo ekutyeni nasekusetyenzisweni kotywala. Kwimizamo ye-300 yesondo eyenziwe ngexesha lokufunda, i-64% ukuya kwi-71% yaphumelela phakathi kwamadoda athabathe iRaw Avanafil powder xa kuthelekiswa ne-27% phakathi kwamadoda athatha indawo ye-placebo. Ezinye iindaba ezimnandi: i-59% ukuya kwi-83% yemizamo ye-80 yokwabelana ngesondo eyenziwe ngaphezulu kweeyure ze-6 emva kokuthatha i-Raw Avanafil powder yaphumelela xa kuthelekiswa ne-25% kuphela yemizamo ephumeleleyo yamadoda athatha indawo ye-placebo. Kwamanye amadoda, iAvanafil powder yasebenza kwimizuzu nje eli-15. (IGoldstein 2012)
Yiyiphi imilinganiselo ye-Avanafil powder
Umthamo weliyeza uya kwahluka kwizigulana ezahlukeneyo. Landela imiyalelo yakho kagqirha okanye imiyalelo kwileyibhile. Olu lwazi lulandelayo lubandakanya kuphela iidosi eziphakathi zeli yeza. Ukuba idosi yakho yahlukile, ungayitshintshi ngaphandle kokuba ugqirha wakho ukuxelele ukuba wenze njalo.
Ukubaluleka kwangaphambili: Ulwakhiwo olubuhlungu> iiyure ezi-6 ubude bexesha zixeliwe (kunqabile). Yalela abaguli ukuba bafune unyango kwangoko ukuba ulwakhiwo luyaqhubeka> iiyure ezi-4. Sebenzisa ngononophelo kwizigulana ezineemeko ezinokubabeka kwimeko yesiqhelo (iarhente yeseli anemia, i-myeloma, ileukemia).